WOWOW Yakanyanya Dhonza Pasi Kicheni faucet NaMagnet Chrome
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Faucets / WOWOW Yakanakisa Dhonza Pasi Kicheni Faucet Ine Magnet Chrome
2311901C yekuraira mirairo
Sarudza nyika AfuganisitaniAland IslandsArubhaniyaArujeriyaAmerican Samoathe nationalAngolaAngwiraAntarcticaAndiguya neBhabhudhaArgentinaArumeniyaArubha OsitireriyaOsitiriyaAzabhaijaniBhahamasiBhahareniBhangiradheshiBarbadosBherarusiBelauBherujiyamuBelizeBeninBhemudhaBhutaniBorivhiyaBonaire, Saint Eustatius na SabaBhoziniya neHezegovhinazimbabweBouvet IslandBhuraziriBritish Indian Ocean TerritoryBhuruneyiBharugeriyaBurkina FasoBurundiKambodhiyaKameruniKanadhaKepu VhedhiCayman IslandsYepakati Ripabhuriki AfrikaChadhiChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsKorombiyaKomorosiCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Zvitsuwa KukuKosita RikaKiroshiyaKiyubaCuraçaoSaipurasiCzech RepublicDhenimakiJibhutiDhominikaRipabhuriki DhominikaEkwadhoEgyptE SavhadhoIkwetoriya GiniEritreaEsitoniyaIthiyopiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinirendiFuranziFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiyaGeorgiaJerimaniGhanaGibhurataGirisiGirinirendiGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiAkanzwa Island uye McDonald IslandsHondurasHong KongHangariAisirendiIndiaIndonezhiyaIranIrakiAyarendiVechiwi ManIzirayeriItariIvory CoastJamaikaJapaniJerseyJodhaniKhazakisitaniKenyaKiribatiKuwetiKijisitaniLaosRativhiyaRebhanoniLesothoRaibheriyaRibhiyaLiechtensteinRituaniyaRukuzemubhoguMacaoMadhagasikaMalawiMarazhiyaMarudhivhuMaliMaltaZvitsuwa MasharoMartiniqueMauritaniyaMorishiyasiMayotteMekisikoMaikironezhiyaMorodhovhaMonakoMongoriyaMondenegiroMotseratiMorokoMozambikiMyanmarNamibhiyaNauruNeparoNetharenziNew CaledoniaNyuzirendiNikaraguwaNaijaNaijeriyaNyu Tsitsuwa NofokuMawodzanyemba KoriyaNorth MacedoniaMaodzanyemba Zvitsuwa MariyanaNoweyiOmaniPakisitaniPalestinian TerritoryPanamaPapa Nyu GiniParaguayPeruFiripainirhodesiaPorendiPutugaroPota RikoKwatakudzokeranaRomaniyaRashiyaRwandaSão Tomé naPríncipeSaint BarthélemySendi HerenaSendi Kitsi ne NevhisiSendi RusiyaSaint Martin (chiDutch chikamu)Saint Martin (French chikamu)Saint Pierre uye MiquelonSendi Vincent neGirenadhiniSamoaSan MarinoSaudhi ArabhiyaSenegalSerbiaSecheresSierra LeoneSingapowoSirovhakiyaSirovhinyiyaZvitsuwa SoromoniSomariaChamhembe AfrikaSouth Georgia / Sandwich IslandsChammhembe KoriaSouth SudanSpeiniShiri RangaSudhaniSurinameSvalbard uye Jan MayenSikwazirendiSiwidheniSiwizarendiSiriyaTaiwanTajikisitaniTanzaniaTairendiTimor-LesteTogoTokerauTongaTrinidhadhi neTobhagoTunisiyaTekiTekimenisitaniVokuTurkey zveTurks IslandsTuvaluUgandaUkireniMubatanidzwa Arabhu EmeretsiZimbabwe (UK)United States (US)United States (US) Minor Outlying IslandsUruguayUzebhekisitaniVanuatuVaticanVenezuelaVietnamMhandara Islands (British)Mhandara Islands (US)Wallis uye FutunaWestern SaharaYemeniZambiazimbabwe
Kicheni faucet imwe kubata 2311901C
Wakaneta here nekusakwana kwekusvika yako imwechete yekubatisisa kicheni kiyi? Usazengure, uye pakarepo tenga WOWOW yekicheni kicheni faucet imwe mubato. Iine kicheni faucet mubato mumwe weWOWOW iwe unogona kukwidziridza huwandu hwako nyore, uye iwe uchave wakakwanisa kusvika chero nzvimbo mukati kana kutenderera kwako kicheni kunyura. Kunyanya kana kicheni yako yakarongedzwa neiri mukicheni kunyura, WOWOW kicheni kicheni faucet imwe mubato inouya inobatsira kwazvo. Nemusoro we360 madhigirii akasvinuka musoro, une wekupedzisira unogadzikana zvaunoda. Panenge pasisina kana nzvimbo yakasara yausingakwanise kusvika nekicheni faucet kamwe chibato cheWOWOW.
Nekudyara kwayo kwemagineti, unogona kupinza mukitchen svutugadzike pamagineti ine simba. Neiyi nzira kicheni kiyunifomu yako ichagara iri munzvimbo uye haidzoreki kupfuura nguva seyakafanana neipi imwe kicheni yekicheni. WOWOW's kicheni faucet imwe mubato saka haizombokuodza mwoyo. Uku kuita kwehunyanzvi kunodzivirira musoro wako wekupuruzira kubva pakudonha kana kugumha padhuze. Iyo yemagineti yemhando yeWOWOW yekicheni faucet mubato mumwe wakaedzwa kanopfuura zviuru gumi. Magineti akavakirwa akakwanisa kuramba miedzo iyi, uye zvichitora nguva zviuru gumi yakakwanisa kugadzirisa musoro wekupopota uye nekunyatso mushure mekuibvisa. Unovimbiswa nemhando yepamusoro inozoita zvakanaka kudzimba nedzekutengesa.
Kicheni faucet imwe mubato une akasiyana mabasa
Iyo kicheni faucet mubato mumwe weWOWOW kunze kwekupa iwe kwakasiyana mabasa. Nemabasa matatu emvura iwe unogona kusarudza chairo basa remvura rinokushandira iwe pakanaka kicheni basa rauri kuita. Unogona kusarudza zvakanaka basa raunoda nebhatani mumusoro wekupuruzira wekicheni faucet mubato mumwe. Iwe unogona kana kusarudza yeiyo yenguva dzose rwukova nzira yekuzadza mapoto ako nemvura, kana nzira yekusvina yekugeza miriwo yako. Iyo yakasarudzika aqua-blade mode inoratidzira simba rakasimba kuti ugeze yako yakasviba ndiro uye kicheni kunyura nekukurumidza uye zvinobudirira.
Kuti uwedzere hupfumi pajendi remvura, iyo inosanganisirwa Neoperl ABS areator inosevha inosvika makumi mashanu muzana mvura. Iwe haimbocherechedze yakadzika yakaderedzwa mvura nekuda kwechinhu ichi chitsva. Asi zvirinani unogona kuvimbiswa kuti hausi kutambisa chero mvura. Iyo aerator inogona kubviswa nyore nyore nemari kuti ichenese iyi kicheni faucet chikamu, kana kuti zvimwe kutsiva. Iyo kicheni faucet mubato mumwe unoita zvakare mushe pasina Neoperl ABS aerator, saka kana iwe usina chivimbo chekuishandisa, unogona kungoibvisa kubva mukicheni faucet yako imwe mubato.
Wepamusoro-mhando kicheni faucet imwe mubato
Unhu hwaunogashira mari yako hunonakidza. Vatengi vazhinji vaisatarisira mhando inoenderana nemutengo weiyi kicheni faucet mubato mumwe. Naizvozvo tinogona kutaura zvechokwadi tisina kuzvirumbidza kuti kicheni faucet yako imwe mubato inokupa iwe unonyanya kukosha yemari iwe yaunogona kuwana mumusika. Unobva wangoona kunaka kwekicheni iyi faucet imwe mubato kana iwe uchiibata. Iko kuremerwa kwekombiki yekicheni kunozivisa simbi yakasimba iyo yakagadzirwa nayo.
Iyo kicheni pombi yemuviri inogadzirwa ne zinc alloy yekuona kugadzikana kwenguva refu, pamwe chete nekicheni singi kiyi inogadzirwa nendarira. Kunze kwezvo, iyo tepi yekombi spout inogadzirwa nesimbi isina tsvina kukupa iwe isina-isina uye isina lead-isina kicheni chishandiso. Iyo yekudhonza hose inogadzirwa neakasimba anti-kuputika zvinhu, uye tucai mvura yekupa mitsara - ine yepasi rose inishuwarenzi kufukidza - inoratidzira isina simbi mesh pamusoro. Kwete zvechinhu WOWOW ine vatengi vazhinji vepasirese vanogara vakavimbika vatengi zvachose, sezvo ivo vachizodzoka kuzotenga mapombi ekicheni eWOWOW neye yavo inotevera kicheni kugadzirisa.
Easy-yekuisa kicheni faucet imwe mubato
Paunosarudza kicheni faucet imwe mubato kubatanidza nekicheni yako ichangogadzirwa, kazhinji nguva inogona kuiswa muminiti nekitchen yako yekuisa pasina imwe muripo. Nekudaro, kana iwe uchida kusimudzira kicheni yako neiyi kicheni faucet mubato mumwe, vamwe vanhu vanozvirega kuti vamiswe sezvo ivo vachitarisira kuti mutengo unodhura unofanirwa kudaidzwa kuisa iyi kicheni faucet mubato mumwe. Nekudaro, WOWOW yaita kuti zvive nyore kuisa iyi kicheni faucet imwe mubato kuitira kuti iwe unogona kuzviita iwe pachako. Iwe haungafanirwe kuroja pombi inodhura uye mumaminetsi makumi matatu iwe unogona kutsiva faeket yako yekicheni yekicheni neiyi nyowani kicheni kicheni faucet imwe mubato weWOWOW.
Vatengi vanoshamiswa nekuda kwekureruka kwekuisa iyi kicheni faucet imwe mubato. WOWOW yakwanisa kugadzira kuisa izvo zviri nyore, nenzira iyo chero munhu anogona kuisa iyi kicheni faucet mubato mumwe mumaminitsi makumi matatu chete. Futi yekukicheni yakagadzirwa nenzira iyo inosiyana zvikuru kubva kune chero imwe faucet yekicheni. Izvo hazvitauri kutaura kuti zvese zvekuisa zvinhu zvinosanganisirwa neiyi kicheni faucet imwe mubato.
Inodhura-inoshanda mukicheni faucet imwe mubato
Iyo kicheni faucet mubato mumwe weWOWOW yakarongedzwa neayo sarudzo faucet escutcheon ye 1- kana 3-gomba kuisirwa. Nenzira iyi hausi kuzosiyiwa uine chero magomba akashata mukicheni yako yekubheka mushure mekumisikidza. Chese chinhu chichaiswa mushe mushe kuti chikupe iyo chaiyo maesthetics iwe yaunofanirwa. Kuisa mukicheni faucet imwe mubato iwe pachako, kit yekuisa inosanganisirwa pamwe nechigadzirwa chako, uye nevhidhiyo yekuisa, kuisirwa kuchaitwa mukuputika kweziso.
Sezvo kicheni kitete imwe mubato weWOWOW inokupa iwe unodhura-hunhu uye chitarisiko chemazuva ano, wawana kicheni faucet kamwe chibato chawanga uchitsvaga. Iyi kicheni faucet imwe mubato zvirokwazvo ndiyo yakanakisa kukosha yemari iwe yauchawana mumusika. Neyemakore mashanu emakore ewarandi uye makumi mapfumbamwe emazuva-mari-yekudzoserwa-iwe unogona kutenga WOWOW yekicheni kicheni faucet mubato mumwe pasina njodzi. Saka iwe wakamirira chii?
Zvakanakira mukicheni faucet mubato mumwe mupfupi:
· Inopa wow-chinhu kune chero kicheni
· Magnetic dhonza pasi inosvina musoro
· 360 degrees inosvika
· Kuita kwakanyanya
· Yakagadzirwa nemhando yepamusoro simbi dzakasimba
· Easy kuchenesa uye nyore kuchengeta
· 5-gore waranti
SKU: 2311901C Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Faucets Tags: Kicheni Sink Faucets, Spot Kuramba Stainless, Simbi isina ngura
MaModhi matatu: Tsvaira Mode / Stream Mode / Spray Mode
Kwekutengesa / Kwekugara
WOWOW Chrome Kicheni Sink Faucet Ne Yenga-Out ...